सोती घटनाका नाइके मल्लको जनार्दन 'कनेक्सन'
भाई भारदारलाई जोगाउन खोज्दा उदांगियो जनार्दनको क्रान्तिकारी खोल !
बिहिवार, जेठ १५, २०७७ कर्णालीखबर
फाइला फोटो : पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्मा ।
काठमान्डौ । रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका ८ सोतीमा भएको युवाहरुको सामुहिक हत्याका आरोपित वडाध्यक्ष डम्बर मल्लको सिधा कनेक्सन पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्मासँग रहेको पाइएको छ । रुकुम पश्चिमका प्रतिनिधिसभा सांसद समेत रहेका शर्माकै संरक्षणमा बसेर मल्लले सोती घटनामा जाजरकोटका ६ जना युवाहरुको नरसंहार गरेको आरोप छ ।
मंगलबारको संसद बैठकमै जनार्दनले आरोपितको बचाउ गर्नु, संसदको रेकर्डमा 'दलितका कारण रुकुम घटना भएको' हो भन्नु, मृत्तक नवराज विक लगायतलाई कुटपिट नभई नदीमा हाम फालेर मृत्यु भएको हो भन्नु लगायतका भनाईले पनि यो कुराको पुष्टि गर्छ । शर्माले संसद बैठकमा एकपक्षीय रुपमा घटनाको विवरण दिने प्रयास गरेका थिए । जसको कांग्रेस सांसदले विरोध गरेका थिए ।
कर्णालीकै एक उच्च तहको नेता बनेका जनार्दनले रुकुम घटनामा दलित समुदायका नागरिक र युवाहरुको निहत्था हत्यामा साथ मात्रै दिएनन्, लाखौ कर्णालीका दलितको आशा र भरोसालाई समेत खण्डहर पारेका छन । आखिर राष्ट्रिय राजनीतिकै प्रभावशाली नेताले किन एकपक्षीय रुपमा आरोपितको बचाउ गरेर घटना तोडमोड गर्दैछन त ? केही तथ्य हेरौँ :
वडाध्यक्ष मल्लको जनार्दन 'कनेक्सन'
जाजरकोट रानागाउँका ६ जना युवाको हत्यामा प्रत्यक्ष सलंग्न भनिएका मल्ल र मेयर विशाल शर्माबीच पारिवारिक सम्बन्ध छ । वडाध्यक्ष मल्ल मेयर शर्माका ससुराली रहेका स्थानीयको भनाई छ ।
चौरजहारी नगरपालिकाका मेयर विशाल शर्मा, कर्णाली प्रदेशका सांसद गोपाल शर्माकाआफ्नै सहोदर दाई हुन । जसले घटना घटेको भोलिपल्ट आफ्नै दलका नेताहरु समेटेर छानबिन समिति गठन गरेका थिए । जसलाई निर्देशन दिएका थिए, पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माले ।
पारिवारिक सम्बन्धका कारण घटनालगत्तै मेयर शर्माले जनार्दनलाई वास्तविकता सुनाएको अनुमान छ । तर वास्तविकता भनेमा दोषी करार हुने डरले तथ्यलाई तोडमोड गर्न मेयर शर्माको पहलमा जनार्दनले पनि साथ दिएको देखिन्छ ।
ससुराली नाता पर्ने अर्थात ज्वाँई वडाध्यक्ष मल्ललाई जोगाउनु मेयर शर्माको दायित्व छ । त्यसमाथि आफ्नै पालिकामा यस्तो नरसंहार भएकाले पनि उनीमाथि दबाब बढेको छ ।
ज्वाँई मल्लले मच्चाएको नरसंहार भएपनि तलदेखि माथिसम्म राजनीतिक पहुँच भएकाले यो घटनालाई रहस्यमय बनाउने प्रयास शर्मा दाजुभाईको छ । ज्वाँई डम्बर मल्ललाई जोगाउन जेठानद्धय मेयर विशाल शर्मा र उनका भाई कर्णाली प्रदेशका सांसद गोपाल शर्मा दिलो ज्यान दिएर लागेको आरोप पीडित परिवारको छ ।
दाई मेयर, भाई प्रदेशसभा सदस्य र शर्मा खानदानकै जनार्दन पूर्वगृहमन्त्री रहेकाले शक्तिको आडमा घटनालाई लुकाउन र दबाउने सकिने उनीहरुको आकलन छ ।
तलदेखि माथिसम्म जोडिएको राजनीतिक र प्रशासनिक शक्तिमा ज्वाँई-जेठान, साला-भिनाजुको यही नाताको जालोमा सोती घटना अल्झिएको छ । घटनामा वडाध्यक्ष मल्लका दाई भाई सबै सलंग्न छन । एमबिबिएस पढ्दै गरेका तर लकडाउनले गाउँ फर्किदा घटनामा सलंग्न भएका सन्तोष मल्ल पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माका आफ्नै भाइ अनिल शर्माका सालो हुन ।
यसरी जनार्दनले घटना भएको झण्डै एक हप्तासम्म परिस्थितीलई आफू अनुकुल गराउन सबै अस्त्र प्रयोग गरेका छन । आफूलाई मन पराएकी युवती शुष्मा मल्ललाई बिहेका लािग भगाउन जाँदा जाजरकोट रानागाउँका नवराज विकले ज्यान मात्रै गुमाएनन् । साथीहरु गणेश बुढा, लोकेन्द्र सुनार, टीकाराम सुनार, सञ्जु विकको पनि अकाल ज्यान गयो । अझै एक जना बेपत्ता छन ।
यसरी जातीय कारण देखाएर निर्दोष युवाहरुलाई मार्ने चरम विभेदकारी वडाध्यक्ष डम्बर मल्लको खुलेआम संरक्षणमा जनार्दन शर्मा उभिएका छन ।
एउटै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुखबाट लिएको सुचना संसदमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्मा र सांसद रसाइलीबाट फरक फरक गरी प्रस्तुत भएको थियो ।
जसले घटना झन रहस्यमय हुन पुग्यो । लामो समय कुटपिट गरेर, धारिलो हातहतियार प्रयोग गरेर, आँखा, मुख र टाउकोमा गहिरो चोट लगाएर मरणासन्न अवस्थामा भेरीमा फ्याँकेका ६ जना युवाको आत्माले सबैभन्दा बढी जनार्दन शर्मालाई पिरोलेको भएपनि उनलाई यसको प्रवाह छैन । चिन्ता छ त केवल आफ्ना भाई र भारदारहरुको मात्रै ।
रुकुमको चौरजहारीबाट विद्रोहीको झण्डा बोकेर जनार्दन शर्माले १० बर्षे माओवादी जनयुद्ध लडे । दलितका छोरालाई छातीमा गोली थाप्न लगाए ।तर आज त्यही बन्दुकको नालबाट आएको परिवर्तनमा जनार्दन शर्मा जातीय छुवाछुतको पक्षमा उभिए । यसले जनार्दनको राष्ट्रिय राजनीतिको हाइट मात्रै घटेको छैन, अब दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने र निमुखालाई न्याय दिने अवसर पनि गुमेको छ ।
नेकपाकै सुर्खेतका एक जना दलित नेताले एक समय भनेका थिए, "जनार्दन शर्मा बाहिर हेर्दा कम्युनिष्ट नेताजस्तो लागेपनि भित्र सामन्त हुन । समय आएपछि त्यो पुष्टि हुन्छ । होइन भने रुकुमबाट उठेको उनको राजनीतिक करियरले काठमाडौँमा घर हालेर कर्णालीको गरीबी र दलित मुक्तीको राजनीति कसरी हुन्छ ?"
सायद त्यो समय आयो जस्तो छ । जनताको रगत बगाएर परिवर्तन ल्याएका नेता जनार्दन शर्मा आफू फेरि सामन्तवादमै फर्किए । जनतालाई निमुखा बनाइरहन चाहे । जुन जातीय विभेदको पराकाष्ठाका रुपमा रुकुम सोतीमा भएका जाजरकोटका युवाहरुको नरसंहारले पनि पुष्टि गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहिवार, जेठ १५, २०७७, ०४:२२:४४